သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ « MMWeather Information BLOG
ငလျင်တစ်ခု၏ အင်အား ဘယ်လောက်ပြင်းသလဲ?
Leaveacomment သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, မြေငလျင်, မြေငလျင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ ငလျင်ပြင်းအား နှိုင်းယှဉ်တွက်ချက်ခြင်း နေမျက်နှာပြင်ရှေ့မှ ဖြတ်သန်းသွားမည့် သောကြာဂြိုလ်
2 comments သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ Venus-transition-2012-JUNE Solar Explosion
One comment သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါး By heronaing, on February 19th, 2011%
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း, သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါး နေပေါက်ကွဲမှု နေပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေ
By heronaing, on February 19th, 2011%
Leaveacomment သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါး ငရဲ ရှိသည်ကို အတည်ပြုကြပြီ ..
By heronaing, on February 10th, 2011%
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ဆိုတာကို နော်ဝေးနိုင်ငံနှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များကအတည်ပြု၊ ကျနော်တို့ မြေကြီးရဲ့ မြေအောက်အလွှာတွင် ရွေ.လျှားမှုအကြောင်း လေ့လာကြတဲ့ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံမှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များနှင့် ပြည်ပက ငှာရမ်းထားတဲ့ ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ နော်ဝေးနိုင်ငံမှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များရယ် ပူးပေါင်းပြီး…ဆိုဗီယက်နိုင်ငံ ဆိုက်ဗေးရီးယား နယ်စွန်တစ်နေရာတွင် မြေအောက်ဆိုက်စမစ် တူးဖော်နည်းနှင့် တူးခဲ့ကြပါတယ်။ ပိုက်လုံးတွေချပြီး တူးကြရင်းက မြေအောက် အနက်ကိုးမိုင် အရောက်မှာ ဇာတ်လမ်းက စတော့တာပဲ။ ပူးပေါင်းတွင်းတူး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆိုဗီယက် ဘူမိဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာ ဒီမီထရီအက်ဇာကော့လို့ ခေါ်ပါတယ်။ တွင်းအနက် ကိုးမိုင်ရောက်တဲ့ အခါ တွင်းတူးတဲ့ပိုက်ဟာ ထိန်းမရအောင် တုန်ခါလာတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဘာကြောင့် တုန်ခါသလဲဟု စစ်ဆေးကြတဲ့အခါ တွင်းတူးပိုက် ထိပ်ပိုင်းဟာ လေဟာနယ်လို . . . → Read More: ငရဲ ရှိသည်ကို အတည်ပြုကြပြီ ..
Leaveacomment သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါး နေပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်
By heronaing, on February 2nd, 2011%
၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် နေ၏ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ကမ္ဘာကြီးကို ချိနဲ့စေတော့မည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက အတည်ပြု
သိပ္ပံပညာရှင်များ စိုးရိမ်နေသည်မှာ ကြီးမားလှသော နေ၏ ဆိုလာ အ၀န်းအ၀ိုင်းကြီးသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၌ ပျံကား ထွက်လာပြီး ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို အဆုံးတိုင် ၀ရုန်းသုန်းကား ဖြစ်မှုများကို ပေါ်ပေါက်စေမည်ဟု ကြိုတင်ခန့်မှန်း ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ် တစ်ခုအတွင်း ပေါ်ပေါက်ခဲလှသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး စွမ်းအားကြီးမားလှသော အာကာသ . . . → Read More: နေပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်
One comment သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါး ဘီတဲလ်ဂျူးစ်, နေပေါက်ကွဲမှု နောက်ထပ်လူတွေနေနိုင်သည့် ကမ္ဘာတခုလော
By heronaing, on January 30th, 2011%
ဒီအကြောင်းတရားကတော့ အံ့မခန်း တိုးတက်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးက နောင်လာမဲ့ နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေ ရဲ့ မြင့်မားတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နက္ခတ်တာရာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ကမ္ဘာနှင့် အလွန်တူတဲ့ ဂြိုလ်တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း ကြေငြာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ထို ဂြိုလ်ကြီးဟာ ကမ္ဘာထက် ၃ဆ ကြီးပြီး ကမ္ဘာနှင့် အလင်းနှစ် ၂ဝ မိုင် ကွာဝေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာသစ်ကြီးဟာ စကြာဝဠာထဲက Goldilocks ဇုန်လို့ ခေါ်တဲ့ နေရာမှာ ရှိပါတယ်။ ထိုနေရာမှာလည်း ပူခြင်း၊ အေးခြင်းနှင့် ပင်လယ် မြစ်၊ချောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် ကမ္ဘာကြီးမှာ ရစ်ထားတဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွေရှိသလို ထိုဂြိုလ်ကြီးကိုလဲ ရစ်ပါတ်ထားတဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွေရှိနေခြင်း၊ ကမ္ဘာမြေကြီး . . . → Read More: နောက်ထပ်လူတွေနေနိုင်သည့် ကမ္ဘာတခုလော
3 comments သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါး new planet, နေအဖွဲ့အစည်းသစ် (၂၁)ရာစုနှစ်အတွင်း မကြာမှီကာလတွင် ကြယ်တာရာတခု ပေါက်ကွဲနိုင်သည်ဆိုသောသတင်း။
By heronaing, on January 28th, 2011%
ကြယ်တာရာ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ခန့် နေ့ချည်းသက်သက် ဖြစ်ပေါ်နေရန် အချိန်နီးကပ်လာပြီဟု သြစတြေးလျ ပညာရှင်များ ပြောကြား။
. . . → Read More: (၂၁)ရာစုနှစ်အတွင်း မကြာမှီကာလတွင် ကြယ်တာရာတခု ပေါက်ကွဲနိုင်သည်ဆိုသောသတင်း။
4 comments သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါး Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum